Published November 2, 2020 at 9:13 PM CST
Poolisin Sioux City guyyaa gidirsanbata as namni sadii qawween dhahame qorachuu jiruu, nama due tokko dabalate.
Solomon J. Blackbird Sioux City keessati naannawa apratmanti parkii Grandview jiruti halkan keessa dhahame. Wayta hospitaala gahe kan du’eedha. Kanaafu, hanga ammaati namni seera jala oole hin jiru.
Namni lamaan biraa kan dhahame ammo halaknuma keessa cook park irraa irraa mazoora xiqqoma fagaate kan argameedha.
Poliisini akka jedhetti namni dhahame sadiinu walitti dhufeenya akka hin qabane gabaasan.
Iowa lakkoofa filattoota jalqabamu laalate qopheesite jirti. Jiraattoni Iowa boru qaaman dhufee kan filuu barbaadu yoo kan jiraatu haguugi fuula akka uffachuu qabamu himan osoo bulchitooni naanno ajajuu hin dandeenu jedhaniyu.
Filattooni Covid-19 kan qabaman yoo tae vote curbside dhaaf himuu akka hin barbaachifne himan. Garuu Country auditor isaanitif bilbilanii akka himuu qaban gabaasan, yookin ammo bakka filannooti nama tokko ogeeyi keessati nama himuuf akka fidatani dhufan himan.
Sababa Covid-19, ayyaana Lighted parade kan Sioux City keessati jijjiiramni mulattee ture.
Daawattoni pride route kan oofu ni dandau santa fi lighted float laaluf.
Qophiinis kan qophaahu guyyaana ayyaan Thanksgiving wiyxata November 23rd dura se’aati 6:30 p.m irrati. Warri deemus parki third street kan Virginia gara Nebraska geesu muka ayyaana waliin kara 4th Nebraska irrati qopheefama.
Oromo News 10/23/20Guyyaa kaleessa nama haarawa Covid-19 qabame US keessati 70,000 kunis jia sadihii as ka akkanati hin mulanne ture, akkasumas namni…
Oromo News 10/26/20Lakkoofsi nama hospitaala gala jiru sababa Covid-19 State Siouxland sadiin keessattu baaye guddataa dhufee jira.Lakkoofsi jiraattota…
Jiraattoni Iowa kan duraa caala sababa Covid-19 hospitaalatti akka galan gabaafame. Lakkoofsi amma jiru,akka gabaasa Website state irrati nama 596,…
Galmeen grim kan state South Dakota dhaa Covid-19 hallan akkuma guddataa dhufaa jirutti
Oromo News 10/29/20Galmeen grim kan state South Dakota dhaa Covid-19 hallan akkuma guddataa dhufaa jirutti. Guyyaa tokko keessati namni haarawa du’e kan…